Google nwalere Fuchsia OS na Pixelbook | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na e nwere ngwaahịa Google nke onye ọ bụla na-atụ anya ya, ọ bụ sistemụ arụmọrụ ọhụrụ ha na-arụ ọrụ kemgbe ihe karịrị otu afọ. Kpọmkwem, anyị pụtara Fuchsia OS. A nụbeghị ihe ikpeazụ banyere ya, ọ bụ ezie na ọnwa ole na ole gara aga, ekpughere ụfọdụ nkọwa ya: ị nwere ike ịhụ njide ndị mbụ.
Ugbu a, ọ na-aga otu nzọụkwụ n'ihu na weputara akwukwo ndi di nkpa ka ewe tinye usoro sistemụ Mountain View na-esote na Chromebooks ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ (Pixelbook), yana ụdị asọmpi ndị ọzọ dị ka Acer Switch Alpha 12 or Intel NUC.
Dika ị ghaputara, nhapụ a lekwasịrị anya, karịa ihe niile, na ndị mmepe. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị dị ike, anyị ga-ahapụ gị akwụkwọ n'ihi na ị na-agbalị onwe gị. N'ezie, nrụnye agaghị adị mfe, yana dịka ndị nyocha izizi siri kwuo, steeti Fuchsia OS bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọzọkwa, site na usoro a, a na-atụ anya na Ogwu ohuru nke Google di otutu karia ka aturu anya enwe ike ịnọ na ụdị ngwa ọrụ niile: Wearables, smartphones, ngwaọrụ ejikọrọ, mbadamba na Chromebooks.
N'agbanyeghị nke ahụ Ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na Fuchsia OS ga-anọchi gam akporo na Chrome OS ma ọ bụ tinye ya na listi ahụ.. Anyị chetakwara na Google kpebiri n'oge gara aga na Chromebooks - ụfọdụ ụdị ochie na ndị ọhụụ niile - nwere ike ịgba ọsọ ngwa gam akporo dị ka ụmụ amaala, mmegharị nke nyere ọtụtụ egwuregwu karịa sistemụ arụmọrụ nke abụọ nke Intanet.
N'ikpeazụ, gwa gị na maka nwụnye ị chọrọ kọmputa abụọ: otu Onye ọbịa na otu dị ka ebe njedebe. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ na-atụ aro ịme nwụnye site na ojiji nke a USB osisi nke a ga-'bibiri' n'oge usoro. Dị ka akụkọ sitere na Arstechnica, usoro mbibi ga-eme ka ịchefu banyere iji nke a kwere n'ọdịnihu. N'ikpeazụ, otu post ahụ dọrọ anyị aka ná ntị na anyị agaghị ahụ Fuchsia OS dị ka ngwaahịa siri ike ruo mgbe 2020.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Google nwalere Fuchsia OS na Pixelbooks
Samsung nwere nsogbu batrị ọzọ